Kyaing Kyaing Kone - Thazin (8).jpg
Image 10 of 10 ThaZin သဇင်
# Monday, December 28, 2009 12:52:07 PM
OH ! i wanna fuck her....ar ar arll..............lol
# Tuesday, March 16, 2010 7:35:00 PM
hay i really wanna fuck u Unregistered user
# Thursday, July 15, 2010 6:34:18 PM
Tha ZIN she is stupide Unregistered user
# Saturday, July 17, 2010 2:59:43 AM
မြန်မာမိန်းမတွေက နင် မိုးဟေကို တို့ကြောင့်သိက္ခာကျတယ်
# Tuesday, August 17, 2010 6:35:44 AM
သဇင်ဆိုတာ တော်ဝင်ပန်းပါ။ ဒီသဇင်ကတော့ ဖာတောင်းထဲက ဖာပန်းပါ။ ခံတာတောင် အမေကန်ထိ သွားခံရတယ်လို့ တော်ပြီ နင့်နဲ့ပါတ်သက်ဆို ဘာမမကြည့်တော့ဘူး။ တိုင်းပြည်နဲ့လူ
မျိုး ဟာ နင်တို့ကြောင့် သိက်ခါကျရတာသိလား သဇင်ဖာသည်မမမမမမ
# Monday, August 23, 2010 11:14:03 PM
sexy group writes:
သဇင်ဖင်ကြီးနဲ့ စောက်ဖုတ်ကို အသေလိုးချင်တာ မှုတ်လဲမှုတ်ပေးအုန်းမှာ ပြန်မှုတ်ပေးရမှာနော် လုံးဝ 2cc နဂါးပတ်နော် ဆွေမျိုးမေ့သွားမယ်
# Monday, August 23, 2010 11:17:47 PM
ငါ့ ချစ်သူကိုပြောတဲ့ ကိုယ်မေကိုယ်လိုးတွေ လီးပဲကွာ ဖင်ကိုအစိမ်းလိုက်လိုးမှာ sexy group မပါဘူး ဒီကောင်တွေတော့လိုးပါစေ
# Sunday, August 29, 2010 7:08:41 PM
လီးပဲကွာ .မင်းတို့ကလည်း သူများကလိုးနိုင်လို့ လိုးနေတာကို ဘာမနာလိုဖြစ်နေကြတာလဲကွာ.ကိုယ်ကမလိုးမယ့် အတိုင်းပဲ။ ဗမာပြည်မှာ သူ့ထက်ဆိုးတဲ့ ဖာသည်မ တွေ အများကြီးပဲ..ဘာကြောင့် သူ့ကိုပဲပြောချင်နေကြတာလဲ..မြေနှိမ့်ရာ လှံစိုက် မလုပ်ချင်ကြစမ်းပါနဲ့..သဇင်ပေးလိုးရင် မလိုးမယ့်ကောင် ဘယ်ကောင်ရှိလို့လဲ.ငါလည်းလိုးမှာပဲ..နောက်ဆို မင်းတို့ ညီမတွေတောင် ဖာသည်မ ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာမှာ..တိုင်းပြည်ကိုလည်း ကြည့်ပါအုံး ဖာသည်မ လုပ်စားရင် အကောင်းဆုံး အချိန်လေ..ဒီအချိန်မှာ အကျင့်တွေ ဗမာသိက်ခါ တွေ ပြောနေရင် ငတ်နေဖို့ ပဲရှိတယ်။ နော်...ဖာသည်မလည်း လူပဲကွာ..ငါတော့ ဖာသည်မတွေကို လိုးဘူးလို့ သိတယ်။ Unregistered user
# Tuesday, August 31, 2010 4:33:23 AM
ကိုအေး မင်းညီမလေး တစ်ညလောက်လိုးချင်တယ် ရမလားဟင်။ မင်းက ဖာခေတ်လို့ရေးထား
လို့နော်။ ဒါကြောင့် မင်းညီမကိုလည်း ဖာတန်းပို့ထားတာမို့လား။
# Thursday, September 30, 2010 11:15:06 PM
# Thursday, October 14, 2010 7:00:13 PM
ခံတဲ့သူကခံ၊ လိုးတဲ့လူကလိုး၊ မင်းတို့နယ် ဘာများအခဲမကျေကြတာလဲ။ ကဲ...ထားပါ။ အဲဒီမုတ်ဆိတ်က မလိုးဘူးထားပါတော့။ မင်းတို့က လိုးနိုင်တဲ့အစွမ်းအစရှိလို့လား။ အခုလို ပုံလေးတွေ တွေ့တော့ မင်းတို့အတွက် သွားတိုက်ဆေးမရဘူးလား။ အကောင်းဘက်က စဉ်းစားစမ်းပါကွာ ကိုရွှေတို့။ Unregistered user
# Sunday, October 17, 2010 6:21:44 PM
အေးကွာ..ငါ့ညီမကို လိုးချင်တဲ့ကောင်ရေ..မင်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ..ငါ့မှာ ညီမတော့ မရှိဘူး..တကယ်ဆိုငါက ဖာခေါင်းလုပ်စားတာကွ. ဖာခေတ်ထဲမှာ မင်းကိုကူညီနိုင်တာဆိုလို့ တစ်ခုပဲရှိတယ်. အဲဒါက နင့်ညီမတွေကို ဖာသည်မ လုပ်ခိုင်းစေချင်ရင် ဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်. ငါအားလုံးကူညီနိုင်တယ်. နော်. နင့်ညီမက အသစ်ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော်. ဒါပေမယ့် မထင်ပါဘူးလေ. အားလုံးက ၀ိုင်းလိုးထားတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာ. မလိုးရင်တောင် နင့်ညီမက ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ် ထိုးရင်ထိုးထဲ့ ပြီးသားဖြစ်မှာပါ.ကူညီပါရစေ..ကူညီပါရစေ ဗျာ..(နိုင်ငံတော် ဖာသည်မ သီချင်း)
caphevienxu # Wednesday, December 29, 2010 8:27:18 AM
# Wednesday, January 12, 2011 9:03:11 AM
# Sunday, April 3, 2011 4:33:59 AM
အစက သီချင်းတွေကိုကြိုက်သေးတယ်။ အခုလိုပုံတွေမြင်ရတော. နင်.အခွေ ဆို copy တောင် မ၀ယ်တော.ဘူး။ နှမြှောတယ် သဇင် နင်.ကို။ သနားလည်းသနားတယ်။ ရတနာတို.လို လင်ကောင်း သားကောင်း ရှာယူပါတော.လား။ အခုတော. ငါလည်း နင်.ကို လိုးချင်လာပြီ။ internet မှာ ဈေးဖွင်.လိုက်ပါ။
# Friday, June 10, 2011 6:06:32 AM
sex broken writes:
# Saturday, June 11, 2011 2:38:46 AM
# Tuesday, August 9, 2011 12:51:22 PM
# Saturday, September 3, 2011 9:48:04 AM
# Saturday, September 3, 2011 9:49:34 AM
# Saturday, September 24, 2011 9:12:19 AM
# Tuesday, September 27, 2011 5:09:50 AM
သဇင်ကိုစောက်ဖုတ်တော့မလိုးချင်ပါဘူးကွာ။အဲဒါကဂလိုင်ခေါက်လို့ရနေပြီလေ။ဖင်လိုးမလားဆိုရင်တော့နည်းနည်းဖီးလ်လာသေးတယ်။ငါကဖင်လိုးတဲ့နေရာမှာ crazy ပဲကွ။
# Friday, October 7, 2011 6:13:57 PM
အတင်းတုပ်တဲ့ ယောက်ျားဖာသည်တို့ရေ.. သဇင်ကမှ ရိုးသားပွင့်လင်းစွာနဲ့ သတ္တိရှိရှိ သူဓါတ်ပုံတွေအတွက် ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့သတ္တိရှိနေသေးတယ်..။ အခုဏကပြောတဲ့ကောင်တွေ.. အိမ်မှာ မင်းတို့ နှမ မင်းတို့ အမျိုး... မင်းတို့ အမေတွေလင်ငယ်နေနေတာ..။ အဲဒါတွေမဖြစ်ကြရအောင်အရင် ကြိုးစားထိမ်းကွပ် လိုက်ကြပါဦး.....။ သူတို့ အနုပညာ သည်တွေကမှ သိပ်ပြီး လှုပ်လို့မရဘူး...။ မအေလိုးတောသားလေးတွေ.။ မင်းတို့နှမတွေ ကောက်ရိုးပုံဘေးမှာလေးဘက်ကုန်းခံခဲ့တာတွေ..။ လူမသိသူမသိ တည်းခိုခန်းမှာ ဖင်ခံလီးစုပ်လုပ်တာတွေ မင်းတို့သိကြလို့လား..။ သူများသားသမီး ကို ဒီလောက်မှိုချိုးမျှစ်ချိုးပြောရတာ...။ ငါ သဇင်ဘက်ကနာတယ်ဆိုတာထက် မင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအောက်တန်းကျလွန်းတာမြင်လိုက်ရလို့ ပိုပြီးအော့နှလုံးနာမိလွန်းလို့ပါကွာ..။ မအေလိုးလေးတွေ..။ မင်းတို့နှမတွေ ငါ့ကို ပေးမယ်ဆိုရင် ငါကယူမယ်လို့ မင်းထင်နေလား..။ ထွီ..လူမသိသူမသိ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဖင်ခံပြီးမှန်းမသိတဲ့ ၊ အလိုးခံထားရမှန်းမသိတဲ့ မင်းတို့နှမ စောက်ပတ် ငါ့လီးက မင်းတို့နှမစောက်ပတ်မပြောနဲ့ ပါးစပ်ထဲကိုတောင်မထည့်ဘူးမှတ်..။ မင်းတို့နှမဆယ်ယောက်လောက်ကိုယူမယ့် အစား...သဇင့်ကိုပဲယူပစ်လိုက်မှာပေါ့ကွ..။ သူ့မှာက မင်းတို့ဘယ်လိုပဲပြောပြော ဘယ်တုန်းက ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးလို့ရသေးတယ်ကွ..။
ဒါတောင်မှ သဇင်က ဖင်ပေါ်နို့ပေါ် ၊ ဘီကီနီပုံတစ်ပုံမှထွက်မလာသေးဘူး.။ ...
# Friday, October 7, 2011 6:17:53 PM
အတင်းတုပ်တဲ့ ယောက်ျားဖာသည်တို့ရေ.. သဇင်ကမှ ရိုးသားပွင့်လင်းစွာနဲ့ သတ္တိရှိရှိ သူဓါတ်ပုံတွေအတွက် ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့သတ္တိရှိနေသေးတယ်..။ အခုဏကပြောတဲ့ကောင်တွေ.. အိမ်မှာ မင်းတို့ နှမ မင်းတို့ အမျိုး... မင်းတို့ အမေတွေလင်ငယ်နေနေတာ..။ အဲဒါတွေမဖြစ်ကြရအောင်အရင် ကြိုးစားထိမ်းကွပ် လိုက်ကြပါဦး.....။ သူတို့ အနုပညာ သည်တွေကမှ သိပ်ပြီး လှုပ်လို့မရဘူး...။ မအေလိုးတောသားလေးတွေ.။ မင်းတို့နှမတွေ ကောက်ရိုးပုံဘေးမှာလေးဘက်ကုန်းခံခဲ့တာတွေ..။ လူမသိသူမသိ တည်းခိုခန်းမှာ ဖင်ခံလီးစုပ်လုပ်တာတွေ မင်းတို့သိကြလို့လား..။ သူများသားသမီး ကို ဒီလောက်မှိုချိုးမျှစ်ချိုးပြောရတာ...။ ငါ သဇင်ဘက်ကနာတယ်ဆိုတာထက် မင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအောက်တန်းကျလွန်းတာမြင်လိုက်ရလို့ ပိုပြီးအော့နှလုံးနာမိလွန်းလို့ပါကွာ..။ မအေလိုးလေးတွေ..။ မင်းတို့နှမတွေ ငါ့ကို ပေးမယ်ဆိုရင် ငါကယူမယ်လို့ မင်းထင်နေလား..။ ထွီ..လူမသိသူမသိ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဖင်ခံပြီးမှန်းမသိတဲ့ ၊ အလိုးခံထားရမှန်းမသိတဲ့ မင်းတို့နှမ စောက်ပတ် ငါ့လီးက မင်းတို့နှမစောက်ပတ်မပြောနဲ့ ပါးစပ်ထဲကိုတောင်မထည့်ဘူးမှတ်..။ မင်းတို့နှမဆယ်ယောက်လောက်ကိုယူမယ့် အစား...သဇင့်ကိုပဲယူပစ်လိုက်မှာပေါ့ကွ..။ သူ့မှာက မင်းတို့ဘယ်လိုပဲပြောပြော ဘယ်တုန်းက ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးလို့ရသေးတယ်ကွ..။ မအေလိုးတွေ သူများသားသမီးကိုကွ...ဒီလောက်တောင်ပြောနေကြတာ..။ ဒါတောင်မှ သဇင်က ဖင်ပေါ်နို့ပေါ် ၊ ဘီကီနီပုံတစ်ပုံမှထွက်မလာသေးဘူး.။ ...
# Friday, October 7, 2011 6:21:53 PM
ခွေးမသားတွေ....။ သူများသားသမီးကို နှာဘူးထပြီးကြည့်လဲကြည့်သေးတယ်..။ ပြော လိုက်ကြတာများရစရာတောင် မရှိဘူး..။ ကိုယ်မေကိုယ်လိုးလေးတွေ..။ တောသား လေးတွေ.....စောက်ရှက်မရှိလာပြောနေကြတယ်...။ သတ္တိရှိ်ရင် မင်းတို့ နာမည်လိပ်စာ အီးမေးလ် အတိအကျထည့်ပြီးတော့ ရေးသားဝေဖန်လိုက်ကြကွ..။ ဟိုမှာ မင်းတို့ပိုးစိုးပက်စက်ပြောနေတဲ့ သဇင်က မှ သူ့ဓာတ်ပုံ ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ နဲ့ အရှင်လတ်လတ်မြင်နေရတယ်..။ မင်းတို့ကောင်တွေက စောက်ရှက်မရှိ နာမည် လေးတောင် (မမှန်တဲ့နာမည်) လေးတောင်မဖော်ပြ၊ An0nymous ဆိုတဲ့နာမည် နဲ့ စော်ကားရေးသားနေတာ..။ မအေလိုးလေးတွေ အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျတာက မင်းတို့ဖြစ်နေပီ..။ အောက်တန်းကျတာကလည်း အခု လိုင်းပေါ်မှာတက်ဆဲနေတဲ့ မင်းတို့တွေဖြစ်နေပီကွ..။ သူ့ဘာသာသူတွဲချင်တဲ့ကောင်နဲ့တွဲ မင်းစောက်ပူပါလား မအေလိုးလေးတွေ...။ ငါလိုးမသားတွေ.....အခုဒီမှာ သဇင့်ကို ပိုးစိုးပက်စက်ရေးနေ တဲ့မင်းတို့ကမှ ဖာသည်မ ရာသီလာရင်သုံးတဲ့ လစဉ်သုံးပစ္စည်း (သုံးပြီးသား) လောက်တောင်မှ အဆင့်မရှိတဲ့ကောင်တွေဖြစ်နေပီ...။ ယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့များ ကွာ .....ထွီ....မအေလိုးတွေ..။ သဇင်မှမဟုတ်ဘူး....တခြား အမျိုးသမီးတွေကိုစော်ကားရေးသားနေလဲ မင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓါတ်တွေဟာလဲ ခုဏက ပြောတဲ့လစဉ်သုံးပစ္စည်း အဟောင်းလောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိဖြစ်နေကြမှာပဲ...။
# Friday, October 7, 2011 6:28:46 PM
ချီးစ်ယားးးးးးးးးးးး...အားပေးတယ်ကွာ ..ဟုတ်တယ် မအေလိုးတွေ သူတို့ပဲ နှာထပြီး ဒေါင်းကြ ၊ ပြုကြ ၊ အိပ်ရေးပျက်ကြနဲ့ နောက်ပြီးတော့ ကျေးဇူးရှင်ကို စော်ကားကြတယ်...။ ဟာဟ.။
ဒီကောင်တွေကို ဆတြာလဲကောင်းတယ်..။ ငါ့မလဲ သူတို့အတွက် ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးနေရတာ..။ ဒီလိုမျိုး အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ကို နှိပ်ကွပ်ရေးသားတဲ့အရေးအသားတွေကို မနှစ်မြိုမိတာ ကြာပီ..။ အပြန်အလှန်ဆဲကြပေတော့ကွာ..။ ငါလဲ သဇင်ကို တော်တော်လေးကြိုက်တော့ အဲဒီလိုရေးတဲ့ကောင်တွေကို ဆဲချင်ပေမယ့် ငါ့ကိုယ်စားဆဲမယ့်ကောင်ပေါ်လာတာ ..ကျေးဇူးတင်တယ်..။ အခြားသော အွန်လိုင်း ယူဇာတွေ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့သူကို အားပေးးနေတဲ့ ယူဇာတွေကိုတော့ အားနာပါတယ်ဗျာ..။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ ငါတော့ လစဉ်သုံးပစည်း အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဟေ့..။ရိုးရိုးသားသားနဲ့ပဲအားပေးတော့မယ်.။
# Friday, October 7, 2011 6:31:49 PM
# Friday, October 7, 2011 6:35:30 PM
သဇင်ကချစ်စရာလေးပါကွ....။ မပြောကြပါနဲ့..။ တကယ်တော့ သူ့ခမျာ...
နောက်ပြီး သူ့ရဲ့ ပစ္စည်းဘော်ဒီစထရက်ချာတွေက အစ အလတ်ကြီး အမှန်အကန်တွေပဲ အင်တွေ အခုအခံတွေမ၀တ်လို့ မင်းသမီးတွေထဲမှာဆို ငါရင်အခုံ
# Friday, October 21, 2011 2:00:17 AM
သြော်...မင်းတို့ကဒီလိုကိုး သဇင့် ဘက်ကနေပြီးတော့ရှေ့နေလိုက်ပေးနေကြတယ်ပေါ့။သဇင်က မင်းတို့ကိုဘာကျွေးထားလို့လဲကွ။ပြောစမ်းပါဦးနော်။သိချင်လို့ပါ။
# Sunday, October 23, 2011 5:15:01 AM
# Wednesday, October 26, 2011 5:50:35 PM
ငါလိုးမသားတွေ လီးပဲကွာ. ဖာသယ်မစောက်ပတ်လောက်တောင်
တန်ဖိုးမရှိတဲ့ မင်းတို့ ဆောက်ပေါက်တွေပိတ်ထားကွာ...
# Thursday, October 27, 2011 4:10:47 PM
# Saturday, November 12, 2011 8:51:04 AM
လီးကြီးဆိုတာငါ့ကိုပြောတာလားဟင်. ငါကသိပ်တော့မကြီးပါဘူး။ဒါပေမယ့်သဇင်တော့ ကြိုက်မှာပါ။
# Saturday, November 19, 2011 10:42:26 PM
# Friday, December 2, 2011 8:48:09 AM
# Thursday, December 8, 2011 3:19:52 AM
ကိုမေကိုလိုးတွေ ငါကအကုန်လိုးမှာ အဲဒီ.ကောမန်.ပေးထားတဲ့ကောင်တွေပါလိုးမှာ ရှင်းလား
ငါ့ကိုယ်ငါတောင်ပြန်လိုးမှာ ပေါက်တယ်နော် ဘယ်လောက်အလိုးကြမ်းလဲမကြမ်းလဲဏဏဉ်းစားသာကြည့်တော့......အာ့ ကောင်းလိုက်တာ
# Friday, December 16, 2011 10:29:10 AM
# Friday, December 16, 2011 10:31:54 AM
ဒီလိုပုံလေးတွေများများရှိတဲ့ ဆိုက် သိရင် တင်ပေးကြပါလားကွာ
# Wednesday, January 4, 2012 6:00:33 PM
# Saturday, January 7, 2012 7:12:42 PM
# Sunday, January 8, 2012 6:49:40 PM
မင်းတို့တစ်ဝက်လိုး ငါတစ်ဝက်လိုးမယ် နော် ဘော်ဒါတို့ အိုခေလား??????
# Tuesday, January 24, 2012 3:58:45 PM
မအေလိုးတွေ...။ သဇင်က အခု လင်ကောင်းသားကောင်း..ရသွားပြီဟ..။ ဒုသန မသောကြပါနဲ့တော့ကွာ....။ သူ့ဘ၀က လန်းသွားပြီဟ..။
# Wednesday, January 25, 2012 6:12:55 PM
သဇင်ရေ မင်းရဲ့စောက်ခေါင်းထဲ ငါ့လီး ဒစ်မြုပ်ရုံလေးထည့်ထားပြီး သေးပန်းထည့်လိုက်ချင်တယ် ဒါပေမဲ့ သေးကတော်တော်နဲ့မထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ် Unregistered user
# Friday, February 3, 2012 9:25:57 AM
# Friday, February 3, 2012 1:59:51 PM
ငါလိုးမသားတွေ မင်းတို့မှာ မအေတွေ ညီမတွေမရှိကြဘူးလား သူ့ဘာသူခံတာ မင်းညီမ ဟာ ငှားပြီးခံနေလို့လား..
# Thursday, March 1, 2012 4:39:49 AM
# Sunday, March 4, 2012 8:53:52 PM
မင်းမေ မင်းလိုးကြကွာ ငါလိုးမသားတွေ..။ ငါ့ချစ်ချစ်လေးကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မပြောကြနဲ့..။ မအေလိုးနှမလိုးတွေ..။
# Saturday, March 24, 2012 10:11:14 AM
# Saturday, March 24, 2012 10:14:24 AM
# Sunday, April 1, 2012 6:19:13 AM
# Tuesday, April 17, 2012 6:38:44 PM
ဒီ ပုံလေးက စင်ကာပူ မှာ ပဲ ချစ်စ၇ာလေး Unregistered user
# Saturday, May 19, 2012 7:08:30 AM
# Saturday, June 2, 2012 5:01:06 PM
လေးဖက်ထောက်ခိုင်းပြီးတော့ကိုလိုးမှာ လုံးဝကိုမရပ်တော့ဘူး တစ်ညလုံးever ဘဲ
# Sunday, June 3, 2012 4:15:20 PM
: ကျနော် ဗီဒီယို ထည့်မှာပဲ.တွေ့ဖူးတယ်လေ..သင်ဇင်အဲလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုခုမှသိတာပါ.ကျနော် စိတ်ဝင်စားလိူ့ပါ..ငွေပေးရမယ်ဆို ကျေနပ်တယ်
# Sunday, June 3, 2012 4:21:30 PM
# Thursday, June 7, 2012 10:53:05 AM
# Monday, June 11, 2012 6:26:14 AM
ဘာပဲပြောပြောငါတော့သူကိုကြိုက်ဘူး။အလကားပေးတောင် sorry ပဲ။
# Monday, July 9, 2012 3:21:24 PM
အဲဒီနေရာကိုယ်ဆိုလဲ မအေလိုး အသေလိုးမှာပါပဲ....ငှဲ..ငှဲ...
# Tuesday, July 10, 2012 7:27:13 PM
သဇင့်ကိုကြည့်ပြီ ငါ့စိတ်တွေ တအားလာတယ် ငါ....
# Sunday, July 15, 2012 4:55:20 AM
ဟာကွာ ပြောနေကြာတယ် အားလုံးကို လီးပဲ
# Sunday, July 15, 2012 9:12:29 AM
# Tuesday, July 17, 2012 2:14:33 PM
# Tuesday, July 17, 2012 2:55:48 PM
# Tuesday, July 17, 2012 2:56:38 PM
# Sunday, July 22, 2012 8:00:47 AM
# Sunday, July 22, 2012 8:04:00 AM
သဇင်ကမှ ဒုဝန်ကြီးသားစီမှာခံတာ မင်းတို့ညီမတွေ ကဆိုက်ကားသမားနဲ့ရမှာ
# Tuesday, July 24, 2012 5:08:43 AM
လိုးချင်လို့ လိုးချင်လိုက်တာ ဘယ်ကောင်မလိုးရလိုးရ လိုးရပြီးတာပဲ စောက်ဖုတ်ကွဲသွားအောင်ကိုးအသကုန်လိုးမှာ ဘယ်ကောင်မ ခံနိုင်မှာလဲ လိုးမယ်နော် ဖင်ကော ကွဲအောင်လိုးပြစ်မှာ ဟဲဟဲ တကယ်ပြောတာ လိုးမယ်နော် လိုးရအောင်ကြိုဆိုပါတယ် လာမှာလား မင်းသမီးမဟုတ်လည်းရတယ် မော်ဒယ်မလေးလဲ လိုးမှာပဲ လိုးတဲ့အကြောင်းများသွားလိမ့်မယ် ဒါပဲနော် လိုးရအောင် လိုးရအောင် ဟေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
# Saturday, August 25, 2012 3:20:45 AM
ပြောချက်တွေကလည်း ပက်စက်လှချည်လားကွယ်ရို့ သဇင်အပါဝင် မြန်မာအမျိုးသမီးများ အရှက်တော် ပွားရအောင် တအားကိုဇွတ်နှိပ်တော့တာကိုးကွဲ့ မြန်မာတရားတော် အစဉ်အလာများဟာဖြင့် မတရားသဖြင့်ကို ပိန်းကောနေပါပြီကော ... တယ်လဲ ခက်သကိုး ...
အရှက်မျိုး ရှစ်ဆယ်မှာ တစ်ခုမလပ်မပြတ်စေရ မထိန်ချိန်လောက်အောင် အကျင့်ပျက်လွန်းသူ လူမိုက်တွေ... လူမိုက်တွေ....
ကျွှနုပ် အလင်္ကာ စကားတစ်ခွန်းအမှန်ဆိုလေရော့မယ် ပုရိသတို့ ...........
**သဇင်ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေ ကိုယ်ရည်စစ်လို့ ဒိလိုရုပ်ရှင်များကိုလည်း များများရိုက်နိုင်ပါစေ**
********** သာဓု သာဓု သာဓု **********
# Sunday, August 26, 2012 3:54:14 PM
# Wednesday, September 12, 2012 2:54:47 PM
# Wednesday, September 12, 2012 3:00:07 PM
# Wednesday, September 12, 2012 3:15:24 PM
# Wednesday, September 12, 2012 3:17:24 PM
# Wednesday, September 12, 2012 3:20:18 PM
# Wednesday, September 19, 2012 9:44:10 AM
သဖင်စောက်ပတ်ရော ပါးစပ်ရော ဖင်ရော လိုးချင်တယ်......
ဖာသည်မအကြီးစားသဇင်လီးပဲ သဇင်ဘက်ပါပြီးပြောတဲ့လူတွေ ဖင်လိုးသတ်ချင်တယ်
# Wednesday, September 19, 2012 9:55:21 AM
# Thursday, September 20, 2012 9:54:36 AM
# Sunday, September 23, 2012 2:09:17 PM
ခံချင်တယ်ကောင်းကောင်းလေး မှုတ်ပြီးလာလိုးပေးပါ သဇင်ထက် ဖင်ပိုကြီးတယ် ကြိုက်လား
# Wednesday, December 5, 2012 7:36:33 PM
နွားသားတွေ မင်းအမေ တို့ ကိုအဲလိုပြောတော့ မင်တို့ကြိုက်မလား
# Wednesday, December 5, 2012 7:40:55 PM
ဟေးကောင်တွေ ဟောက်ပတ်တခုအတွက်မင်းတို့ ဒီလောက်တောင် ကဲတေကြလားး ငါတို့ မြန်မာတွေသိက္ခာကြတယ်
# Saturday, December 15, 2012 5:59:07 PM
လောကကြီးမှာ သဇင် လို ဖြစ်နေကြတာ ဘာထူးဆန်းလဲ။ ထူးဆန်းတာက ရိုက်တဲ့ ကင်မရာကို သဇင် တကယ် သိ-မသိ ဆိုတာပဲ ထူးဆန်းမှာပါ။ မသိရင်တော့ သဇင် ရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ တောသူမ အဆင့်ပဲ။
# Saturday, January 5, 2013 6:27:21 PM
လီးလိုပဲကွာ ငါလိုးးးးးးးးးးးးမသားတွေ။ လီးမှတောင်မပြောကြနဲ့။ နှာဘူးထချင်ထ။ ပစ်မှားချင်လည်း ပစ်မှား မဆော်ကားကြနဲ့ကွ။ လီးဖြစ်လား သဇင့်ကို ချစ်တော့။ မအေလိုးတေါ။ နှာဘူးလည်းထသေးတယ်။ မတရားလည်းပြောကြတယ်။ မအေလိုး ယောကျားဖာသည်တွေ။ လီးပဲကွာ။
# Saturday, January 5, 2013 6:31:51 PM
ချစ်တယ်ကွာ။ လီးဖြစ်လား။ ခွင်လွှတ်လို့ရတယ်။ နားလည်လား။ သူ့မှာ ဘာအပြစ်မှမရှိဘူး။ ဒီပို့စ်မှာ မကောင်းတာရေးကြတဲ့ နှာဘူးကောင်တွေ။ မတရားပြောကြတဲ့ နွားတွေ(ခွင့်လွှတ်နားလည်သူတွေ ဖေးမသူတွေမပါ) မင်းတို့နှမတွေ သူ့ဘဲတွေနဲ့ ကုန်းတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့ မြင်ကွင်းကို ပြန်မြင်ယောင်ကြည့်စမ်း။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေထက်တောင်စိုးမယ်ဆိုတာ မင်းတို့နားလည်လား။ အေး ငါတို့ကတော့ ခွင်လွှတ်တယ်။ နားလည်ပေးတယ်။ ချစ်လို့ရတယ်။ သဇင့်ကိုချစ်တော့ လီးဖြစ်လား ငါလိုးမသားတွေရဲ့။
# Friday, February 1, 2013 5:46:25 AM
ရှေ့ကကိုကြီးအလင်္ကာပြောတာကို ညီလေး ကျော်စွာ
ထောက်ခံတယ် အဲသလိုမှပဲ ညီလေးတို့ အကိုတို့ ကားကောင်းကောင်း ကြည့်ရမှာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား
# Friday, February 1, 2013 5:49:37 AM
# Friday, February 1, 2013 2:45:26 PM
# Friday, February 22, 2013 6:09:38 PM
Dead boy writes:
ထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက် အောက်လှန်ရတာ သဇင်ပါ သူအခက်ခဲတွေကို သူနိုင်တဲ့နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းတာပါ ဘဝမှာမရည်ရွယ်ဘူးတာတွေက ဖြစ်လာတော့ ဖြစ်သလိုပဲ ဖြေရှင်းရတာ သူအပြစ်ကြည့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး!နားလည် ပေးကြည့်ပေါ့ မင်းကိုတိုင် သဇင် နေရာမှာဆို ဘာလုပ်မလဲ
# Friday, March 15, 2013 9:24:13 AM
မင်းတို့ ညီမဖင်ပဲငါ့ကိုပေးလိုးပါလား...အသဲစွဲသွားအောင် လိုးပေးမယ်...သေချာ ကလော်ပေးမယ်...ခံစေချင်ရင် ဆက်သွယ်လိုက် colorno24 ကို....................
# Tuesday, March 19, 2013 3:31:11 PM
လူတိုင်းဟာအတူတူပဲ။လူသိတာနဲ့ လူမသိတာ၊စိတ်နဲ့ ကျူးလွန်တာနဲ့ လက်တွေ့ ကျူးလွန်တာပဲ ကွာတယ်။သဇင်ကလက်တွေ့ ကျူးလွန်တယ်၊ကိုယ်တွေကစိတ်နဲ့ ကျူးလွန်တယ်။ငါတို့ ကလူတွေမတွေ့ 
တော့မိမိကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့ ထင်တယ်။ဒါပေမယ့်Jesusအပါအ၀င်ဘုရားတိုင်းကစိတ်နဲ့ ကျူးလွန်တာကပိုအပြစ်ကြီးတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ပညတ်တရားအရစီရင်ကြေးဆိုရင်လူသားသန်း ပေါင်း7000လုံးဟာငရဲပဲ။ဒါပေမယ့်သခင်ယေရှုကသူဟာလူသားတွေရဲ့ အပြစ်အတွက်လောကကြီးကို ကြွဆင်းလာတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လက်ဝါးကားတိုင်မာငါတို့ အားလုံးရဲ့ အပြစ်ကိုဆေးကြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကမသဇင်ကိုအပြစ်လွှတ်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ စာဖတ်သူအားလုံး ရဲ့ အပြစ်ကိုလဲသခင်ယေရှုကခွင့်လွှတ်နေပါတယ်။မိတ်ဆွေကဒါကိုမသိတော့မိမိရဲ့ အကျင့်သီလကိုအ မီပြုပြီးအသက်ရှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုှုင်တယ်။ဒါပေမယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ထဲမာပဲကျရှုံးခဲ့တယ်။အံကြိတ်ပြီးတော့သီလ စောင့်တယ်၊ဒါပေမယ့်မရပါဘူး၊ပြန်ပြီးကျူးလွန်မိတယ်။မိတ်ဆွ။သခင်ယေရှုကပြောတယ်၊မင်းတို့ ဟာအပြစ်ကိုရှေုာင်ရှုားနိူင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး၊ဒါကြောင့်ငါဟာလောကကြီးကိုဆင်းလာပြီးလောကကြီးမာရှိုတဲ့လူသားအားလုံးရဲ့ အပြစ်ကိုယူဆောင်ပြီးခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီ၊ဒါကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ထာဝရအသက်ရမယ်လို့ ကျမ်းစာကအတိအလင်းပြောနေတယ်မိတ်ဆွေ။ယုံကြည်တယ်မယုံကြည်တာကမိတ်ဆွေရဲ့ ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်။လူတွေကသဇင်ကိုပဲမြင်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုမမြင်ဘူး။တကယ်တမ်းဝန်ခံရမာကငါ ဟာအညစ်ပတ်ဆုံးဖြစ်တယ်၊လော ...
# Monday, April 8, 2013 2:35:26 AM